जीवनशैली – onlinedarpan:
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल दिन्छ। तर गलत ठाउँमा रोप्नाले दोष पनि लाग्न सक्छ। वास्तु अनुसार यस दिशामा रोप्नुहोस् तुलसी तुलसीको बिरुवा भूलेर पनि दक्षिण विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
काठमाडौं । तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ । तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइन्छ । त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
एजेन्सी : वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा राखिएको हरेक वस्तुले घरलाई र घरका सदस्यलाई प्रभावित गर्ने गर्छ । तीमध्ये भित्तेघडी पनि एक हो । भारतका ज्योतिषाचार्य पं प्रफुल्ल भट्टका अनुसार घडीले तपाईंको सफलताको बाटो खोल्न पनि सक्छ र बन्द पनि गर्न सक्छ । यदि यससँग जोडिएका वास्तुका केही सजिला कुरा ध्यानमा राखे तपाईंको खराब समयलाई राम्रो बनाउन विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on November 18, 2018 Author Manoj Phuyal	Comment(0)
गाडीमा यात्रा गरिरहेकाहरु होस् वा मर्निङ वाक गरिरहेकाहरु, कुनै कामधन्दामा लागिरहेकाहरु होस् वा कलेज धाइरहेकाहरु । धेरैजसो कानमा ईयरफोन ठोसेर एकसूरमा केही सुनिरहेका हुन्छन् । कतिपय त ईयरफोन लगाएर सवारीसाधन पनि हाँकिरहेका हुन्छन् । यसको कारणले दिनप्रतिदिन दुर्घटना भइरहेका छन् । सवारी चलाउँदा ईयरफोनको प्रयोग गर्नेहरु आफुमात्र दुर्घटनाको जोखिममा छैन, उनीहरुको कारण अरुले यात्रु, बटुवा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on November 4, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
सबै महिला महिनावारीबाट गुज्रनुपर्छ । यो एउटा सामान्य प्राकृतिक अवस्था हो तर दुर्भाग्य के छ भने समाजमा अझै पनि महिनावारी हुनु पापको रुपमा लिइन्छ । यसैले सार्वजनिक रुपमा यसबारे चर्चा गर्न महिलाहरु हिच्किचाउँछन् । यसबारे महिलामा धेरै खालका भ्रम पनि विद्यमान छन् । तर, यो एउटा शारीरिक जैविक प्रक्रिया हो भन्नेबारेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on November 2, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
उखुमा प्रशस्त मात्रामा पानीको मात्रा हुने भएकाले पिसाव सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । यसको सेवनले कलेजोलाई मजबुत बनाइराख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजो सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । उखुको रस सेवन गर्नाले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ । उखुको जुसका यस्ता फाइदाः १. पाचन प्रणालीमा सुधारः उखुको रसमा हुने पोटासियमले पाँचन प्रणाली पनि राम्रो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
परापूर्वकालमा मृत्युका राजा यमराज बहिनी यमुनालाई भेट्न यमलोकबाट पृथ्वीमा लामो समय आएका थिएनन्। त्यसैले यमुनाले निम्ता दिएर दाजुलार्इ बोलाइन्, त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमराज यमपञ्चकभर यमुनाको घरमा बसे । भाइटीकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिएर दाजुसँग आशीर्वाद लिइन्। त्यहीबेलादेखि भाइटीका शुरु भएको विश्वास छ । भाइटीकालाई दाजुभाइसँग भेटघाट हुने, बिग्रेको सम्बन्ध सुधार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on October 31, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
के तपाईँ परिवारको जेठो सदस्य हो ? हालै सार्वजनिक अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो भने जेठो सन्तान हुनुका धेरै फाइदा छन् । सो अध्ययन अनुसार परिवारको सबैभन्दा जेठो सन्तान अन्य भन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक हुन्छ । जर्मनस्थित लिपजिग युनिर्भ्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुको एक समूहका अनुसार पहिलो बच्चा पछि जन्मिने हरेक सन्तान “बच्चा” पहिलोको तुलनामा कम बौद्धिक र विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…